Umaka: ukuqashelwa | Martech Zone
Ukuxhumana okubonakalayo kuguqukela emsebenzini
NgoLwesithathu, July 13, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Kuleli sonto, benginemihlangano emibili nezinkampani ezahlukahlukene kuleli sonto lapho ukuxhumana kwangaphakathi bekugxilwe khona engxoxweni: Owokuqala bekunguSigstr, ithuluzi lokumaketha isiginesha le-imeyili ukuphatha amasiginesha e-imeyili kuyo yonke inkampani. Inkinga esemqoka ezinhlanganweni ukuthi abasebenzi bagxile emisebenzini yabo yomsebenzi futhi abahlale benika isikhathi sokuxhumana nomkhiqizo ngaphandle kumathemba nakumakhasimende. Ngokulawula amasiginesha e-imeyili enhlanganweni, uSigstr uqinisekisa ukuthi lokho okusha
Alikho isonto eliqhubeka Martech Zone ukuthi asikhuthazi futhi sabelana ngamaqiniso abanye abantu, imibono, izingcaphuno, kanye nokuqukethwe kwabo nge-infographics nokunye okushicilelwe. Asisona isiza se-curation sokuqukethwe kwabanye abantu, noma kunjalo. Ukwabelana ngemibono yabanye abantu akukwenzi igunya, kuyabona futhi kuqinise igunya lombhali. Kepha… ukuthuthukisa, ukubeka amazwana, ukugxeka, ukufanekisa nokuchaza kangcono okuqukethwe abanye abantu akugcini nje ngokubona nokuqinisa